Converters AVCHD Bilaashka ah ee Windows iyo Mac
AVCHD u taagan tahay Advanced Video codec Qeexid Sare oo sida magacaba ka muuqata waa mid ka mid ah kuwa qaabab kuwaas oo hubiyo in kaamirada ku shaqeeyaan hab sax ah in la hubiyo in ay sawiro la xiriira iyo snapshots waa gobol ka mid ah tahay. Qaab AVCHD waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in qaab AVCHD inay hubiyaan in wixii kaloo lagu sameeyo gudaha wakhtiga oo waafaqsan shuruudaha user dhigi.
Qeybta 1: Need of qaab AVCHD diinta
Qeybta 2: Best AVCHD Video Converter
Qeybta 3: AVCHD Converter Free
Qeybta 4: Online AVCHD Converter
Ka dib markii qaar ka mid ah sababaha lagu halkan looga hadli doonaa si faahfaahsan weyn:
i. Wixii tafatirka
Tafatirka ama marin-habaabinayaan waaxaha video ah waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican haddii ay la qaban karo, in si sahlan, si degdeg ah oo lagu kalsoonaan karo hab oo Sidaa darteed waa lagama maarmaan si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo iyada oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Haddii qaab AVCHD la bedelo si kale wax ka dibna tafatirka uu noqdo mid fudud oo gobolka ka mid ah tahay iyo waxa ay sidoo kale waa inuu xaqiijiyo in qofka uu helo natiijada ugu wanaagsan iyo sidoo kale tayada guud waxaa sidoo kale sii raagayaan iyo video ama sawirada yihiin musuq maasuqay sida waxay u baahan yihiin iyo waxay doonayaan isticmaalaha aan wax u dhimin tayada.
ii. Wixii ku ciyaari Mac
Waa mid ka mid ah kuwa dhufto oo loo isticmaalay by malaayiin users adduunka oo dhan iyo sabab la mid ah waxa aad u muhiim ah in la badalo qaab AVCHD si loo hubiyo in saldhig user la daboolay aan arin kasta oo ay si aad u daawato awoodaan videos iyo sawirrada ka aragto oo aan wax arin ama dhibaato. Waxaa kale oo aad u muhiim ah in la ogaado in dadka isticmaala ku dacwayn karaa qalab kala duwan si ay u hubiyaan in qaab la ciyaari Mac aan arin kasta oo qaybtii dambe ee qodobkan qalabka sida ayaa sidoo kale waxaa lagu sharaxi doonaa si faahfaahsan.
iii. Wixii ku ciyaari smartphone
Sidoo kale waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee aad u hubiso in qaab AVCHD ah waxaa loo baddalaa oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waa si ay u hubiyaan in qaab casriga la xiriira ee aan la badaley laakiin sidoo kale baaro si loo hubiyo in qaabka uu u shaqeeyo u wanaagsan oo loo isticmaali karaa si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican oo kaliya. Waxaa sidoo kale in la xuso in qaab AVCHD on dhan ma waxaa la ciyaari karaan taleefan kasta smart sida labada teknoolajiyada waaweyn ee sida android iyo macruufka ma taageeri ciyaareed si toos ah qaabka
Soo diyaariyay Wondershare Corporation aad u awood badan AVCHD Video Converter waa inuu xaqiijiyo in sida ugu fiican loo dhiibaa si user ah. Version maxkamad ayaa sidoo kale waxaa la heli karaa oo waxaa lagu talinayaa sida ay u ogolaan doonaa dadka isticmaala si aad u hubiso in wax iibsiga loo sameeyo iyo go'aan la sameeyo sida ugu dhaqsaha badan ugu shishaysa waqti tijaabo. Waxa ay taageertaa oo dhan qaabab video iyo tallaabooyinka la xiriira sida soo socota ee arrintan la xiriira:
Beddelaan in ka badan 150 qaabab jiraan AVCHD / 4K / 3D
Hawlaha Edit awood leh, In kor loo qaado & shakhsiyeeyo Your Videos File.
Version maxkamad ayaa wax badan ka kooban, haddii aad rabto in aad isticmaasho hawlaha oo dhan, waxaad u baahan tahay iibsan nooca buuxda.
Hage u fududahay diinta ee AVCHD
1. Download iyo rakibi barnaamijka:
2. files ayaa markaas waa in lagu daro adiga oo riixaya badhanka ku habboon:
3. Qaabka markaas waa in la soo xulay guddi saxda ah:
4. button diinta waa in la sii adkeeyey si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo dhammayn nidaamka:
Waxaa jira tobanaan kun oo AVCHD Converter s si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo oo user helo tayada ugu fiican. In qaybtan ka mid convertor sida laga wada hadli doonaa si faahfaahsan:
Developer: Corporation Ziiosoft ayaa
URL Download: http://avchd-video-convert.en.softonic.com/
Barnaamijku waa mid ka mid ah xubnihii casriga ugu fiican ee jeer oo dhan sida u hubiyaa in ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah dib u dhac kasta oo aan
Interface waa gui oo sidaas daraaddeed waa user saaxiibtinimo iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in barnaamijka uu yahay mid ka mid ah ugu fiican in la isticmaalo iyo sidoo kale.
Maxaa yeelay, dhammaan dadka isticmaala aan casriga ah ugu xeel dheer barnaamijkan waa boon ah
Taageerayaan soo baxay qaabab
Waa barnaamij badan oo ay taageerayaan iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in ay taageerto cayn kasta oo ah qaabab si ay u hubiyaan in heerka ku qanacsanaanta user la kulmay.
barnaamijka waa mid aad u fududahay in la isticmaalo iyo rakibi iyo user ka heli kartaa dhammaan xarumaha ee ay ku rakibidda hal barnaamij si sidan waa xal yarada waxay.
Barnaamijku wuxuu had iyo jeer ku xayiran iyo shilalka keenaya oo dhan barnaamijyo kale oo la xiriira inuu shil oo ay ku guuldareysato oo ay tahay con kaliya oo uu soo arkay iyo haatan.
Mid ka mid ah ugu wanaagsan ee online Converter AVCHD in loo isticmaali karo si loogu badalo files AVCHD waa ZamZar online video convertor in waxa uu ku yaalaa URL http://www.zamzar.com/convert/mts-to-mp4/ oo waa mid ka mid oo ka mid ah hababka ugu fiican ee sida fiican u ah si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo iyada oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa la sameeyey ay teknoolajiyada ZamZar iyo qaabab oo dhan waxaa taageera this convertor online:
Tani convertor waa mid aad u fududahay in la isticmaalo iyo user inay hubiyaan in file ah waxaa loo baddalaa ilbiriqsi gudahood ka dhigi kartaa Con user wuxuu u baahan yahay in ay geliyaan faylasha mid mid dhammaan faylasha aan la gelin karaa hal mar.
Xaraf ee qaab AVCHD la sameeyo iyadoo la isticmaalayo qaab H.264 iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in qaabka loo yaqaan si loo hubiyo in xogta la cadaadiyo oo yar meel disk baabba'saday, marka ay timaado mts iyo m2ts format. Sida qaab this tiirsan farsamada waa in sidaas daraaddeed si state of tahay waxaa aad muhiim u ah in la ogaado in sawir xirfadle iyo sidoo kale wax toogan jiray hubiyo in qaab waxa la adeegsadaa dukaanka oo isku dherer ah ama tirada sawiro in isla meel aan ku allabaryaya sameeyo tayada video iyo sidoo kale qeexidda guud oo uu soo qiimeeyo mid ka mid ah qaababka ama tayada wax video ama sawir ugu fiican.
Kaalmada 24ka saac
> Resource > Beddelaan > Top 3 AVCHD converters for Windows iyo Mac